Itoobiya, Suudaan iyo Masar oo dib u bilaabay wadahadalka biyo xireenka Nile
Itoobiya, Suudaan iyo Masar oo dib u bilaabay wadahadalka biyo xireenka
Wadaxaajoodyaddan ayaa xal loogu raadinayaan is-mari-waaga ka taagan buuxinta iyo howlgalka GERD.
ADDIS ABABA, Ethiopia – Itoobiya, Suudaan iyo Masar ayaa shalay dib u bilaabay wadaxaajoodyadda ay xalka ugu raadinayaan is-mari-waaga daba-dheeraaday ee buuxinta iyo howlgalka biyo-xireenka webiga Nile.
Wasiiradda Waraabka iyo Biyaha ee saddex dal ayaa ka qeybgalay wadahadaladda oo lagu qabtay online sabab ku aadan Covid-19.
Kulankaan fogaan aragga ah ama maqalka iyo muuqaalka ah waxaa sidoo kale xaadiray mas'uul ka socday Midowga Afrika iyo Koonfur Afrika, oo waqti xaadirkan ah gudoomiyaha ururka AU-da.
Wakiilo ka socday Mareykanka iyo Midowga Afrika ayaa si lamid ah waxay goobjoog ka ahaayeen wadahadalada dhinacyadda.
Wadahadalkaan ayaa imaanaya maalin kadi markii kumanaan ruux ay isu soo bax ka dhigeen caasimadda Addis Ababa, iyagoo taageeraya wejiga koowaad ee buuxinta biyo xireenka malaayiinka lagu bixinayo.
Ethiopia ayaa horey u sheegtay in ay kula heshiisay Suudaan iyo Masar buuxinta wejiga koowaad oo kolkii hore lagu muransanaa.
Sikastaba ha ahaatee, Itoobiya ayaa waxay biyo-xireenka u aragtaa fursad ay ku xoojin karto dhaqaalaheeda, halka Masaarida ku qeexeen mid wiiqaya saamigeeda biyaha, waxayna dhalisay xiisad meel culus gaartey.
Itoobiya oo "daabushay gantaalo" xilli muranka Nile ee Masar uu kasii daray
Afrika 21.05.2020. 16:10
Cabsida laga qabo in uu dagaal ka dhex-qarxo Addis Ababa iyo Khaahira ayaa sii kordheysa.
Olole liddi ah Soomaalida oo ka bilowday qaar kamida dalalka Carabta
Soomaliya 15.07.2020. 18:05
Somaliland oo lugaha la gashay hardanka dalalka Itoobiya iyo Masar
Somaliland 15.07.2020. 16:00
Cawad oo xaqiijiyey socdaalka wafdi ka socda Masar oo DF "qarisay"
Soomaliya 23.03.2020. 19:00
DF oo "ku rafaneysa" maareynta loolanka Masar iyo Itoobiya ee Nile
Soomaliya 18.03.2020. 19:00
Sudan oo shaacisay talaabo loo qaadey xalinta muranka webiga Nile
Afrika 04.07.2020. 06:50
Trump oo farogeliyey muranka biyo xireenka Nile ee Masar iyo Itoobiya
Afrika 05.11.2019. 13:00